यसरी चिन्नुहोस खाने च्याउ - नेपालबहस
यसरी चिन्नुहोस खाने च्याउ
| १४:५३:२४ मा प्रकाशित
२२ भदाै, काठमाडाैं । वर्षायामको समय लागेसँगै यति बेला वनपाखा, खोला र चौरमा च्याउ प्रशस्त उम्रिन्छन् । तीमध्ये कतिपयमा पौष्टिक तत्त्व प्रशस्त पाइन्छ । तर, सबै च्याउ खानयोग्य हुँदैनन्, कतिपय निकै विषालु हुन्छन् । विषालु च्याउ खाएर बर्सेनि धेरै मानिसको ज्यान जान्छ ।
– खानयोग्य च्याउको छाता छुँदा चिप्लो हुन्छ । छाता खस्रो भएको च्याउ विषालु हुन्छ । यस्तै, नमिठो गन्ध, धेरै झुस, थरीथरीका रङ र तितो स्वाद भएका च्याउ विषालु हुन्छन् ।
– छुँदा रङ परिवर्तन हुने र भाँच्दा चोप निस्कने च्याउ पनि विषालु हुन्छन् ।
– किरा नलाग्ने भएकाले विषालु च्याउ लामो समय रहिरहन्छन्, खानयोग्य च्याउ छिटै कुहिन्छन् । विषालु च्याउ हेर्दा सफा र आकर्षक देखिन्छन् ।
– भण्डारण गर्ने तरिकाबाट खानयोग्य च्याउ पनि विषाक्त हुन सक्छन् ।
– च्याउको प्रकृति, उम्रेको स्थान र भण्डारण गर्ने तरिकाअनुसार त्यसले शरीरमा गर्ने असर पनि भिन्न हुन्छन् । कतिपय च्याउ खानासाथ मृत्यु हुन्छ । कतिपय च्याउ खाएपछि बिस्तारै स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ।
– विषालु च्याउ खाएपछि बान्ता, झाडापखाला, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने लक्षण देखिन्छन् । केही बेर सन्चो भएजस्तो पनि हुन्छ ।
– च्याउको विषले सीधा कलेजोमा असर पार्छ । त्यसपछि पित्तमा पुगेर नयाँ तत्त्वको निर्माण गर्छ, जसले मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमता घटाउँछ । अनि कलेजो र मिर्गौला फेल भएर मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
– उमेर समूहअनुसार विषालु च्याउका असर पनि फरक हुन्छन् । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा विषको असर छिटो पर्छ ।
– त्यसैले खानयोग्य हो या विषालु भन्ने यकिन नगरी जंगली च्याउ घरमा नल्याऔँ । धेरै प्रजातिका च्याउ मिसाएर पनि नपकाऔँ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आत्मनिर्भरमुखी कृषिमा जोड १ हप्ता पहिले
कोरोना महामारीमा कृषि कर्ममै युवा २ हप्ता पहिले
देशभर सुरु भयो राष्ट्रिय खाद्य बैंकको कृषि परियोजना ३ हप्ता पहिले
खाम्लामा नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम शुरु ३ हप्ता पहिले
कृषि शिक्षकको ‘हाइटेक’ नर्सरी ४ हप्ता पहिले
अग्रणी शक्ति बनाउन महाधिवेशनः अध्यक्ष थापा ७ मिनेट पहिले
टुकोनले श्रममन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र १३ मिनेट पहिले
कोपा अमेरिका २०२१ पनि डिशहोममा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने ३८ मिनेट पहिले
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार ४५ मिनेट पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने २ घण्टा पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए २ घण्टा पहिले
तीन हाइड्रो कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट, शेयरमूल्य कति ? ५ घण्टा पहिले
युरोकप फुटबलमा पोर्चुगलमाथि जर्मनीको सानदार जित १९ घण्टा पहिले
राहत सामग्री पुर्‍याउने होड : दुर्गम हेलम्बुमा भन्दा सुगम मेलम्चीमा केन्द्रित ! १० घण्टा पहिले
जनकपुरधाममा १ सय श्ययाको कोभिड विशेष अस्पताल ३ दिन पहिले
मेलम्चीमा फेरि बाढी, हेलम्बुको प्रहरी चौकी नै तहसनहस ! १ दिन पहिले
मनाङेको अभिव्यक्तिप्रति राखेपको गम्भीर ध्यानाकर्षण, कारबाहीको माग ५ दिन पहिले
जनप्रतिनिधि आएपछि भरतपुर महानगरको बेरुजुमा कमी ११ घण्टा पहिले
ट्रकले प्रहरीको गाडीलाई ठक्कर दिँंदा ६ प्रहरी घाइते, चालक नियन्त्रणमा २ दिन पहिले
सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा रु ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट पेश [ पूर्णपाठ ] ५ दिन पहिले
बलिउड निर्देशक चन्द्रशेखरको ९७ बर्षको उमेरमा निधन ४ दिन पहिले
अर्नाकोट विमानस्थलको डिपिआर तयार २ दिन पहिले
बाइडेनले दिए इजरायलका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बेनेटलाई बधाई ६ दिन पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट ३९ जनाको मृत्यु ३ दिन पहिले
बिजुली आउने र जाने समस्यामा लमजुङबासी २ दिन पहिले
आज साँझ एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै ३ हप्ता पहिले
चितवनको ट्राफिक कार्यालय भवन शिलान्यास ४ हप्ता पहिले
शिक्षकलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न डा. कोराइलाको माग २ हप्ता पहिले
नागरिक लगानी कोषको संस्थापक शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने आज अन्तिम दिन ३ महिना पहिले
हिमपातबाट सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी रहन निर्देशन ५ महिना पहिले
लघुवित्त शेयरमूल्यमा उछालः नौं कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढ्यो ४ महिना पहिले
बसाँई सर्दै मार्क्स, एङ्गेल्स, स्टालिन र माओहरु ६ महिना पहिले